Khiyaamada lagu caddeeyo kala-goysyada tiilada | Bezzia
Tony Torres | 12/05/2022 10:00 | Guriga
Nadiifinta jikada ama musqulaha iyada oo aan la caddeynin kala-goysyada taayirrada waxay ku dhowdahay in si adag loo shaqeeyo iyada oo aan wax abaal-marin ah lahayn ka dib. Sababtoo ah xaqiiqadu waxay tahay in jaleecada hore, haddii kala-goysyadu aysan caddaan ahayn waxay u muuqataa in tiirarka ay wasakh yihiin. Si aad u xalliso uma baahnid inaad qabato shaqooyin waaweyn, ama aad ka fikirto inaad beddesho tiles si aad ugu raaxaysato inaad aragto wax kasta oo cusub oo dhalaalaya.
Kaliya waa inaad isticmaashaa alaabta saxda ah oo aad raacdo talooyinka qaar sida kuwa hoose. Iyo dadaal yar waxaad kaga tagi kartaa kala-goysyadaas si cad. Taas, in kasta oo aan ognahay in aanay muhiim ahayn, waxay siinaysaa xasillooni yar oo maskaxda ah ee deegaankaas oo muhiim u ah sida guriga laftiisa.
1 Sida loo caddeeyo kala -goysyada foornada
1.1 Tabaha kale
Sida loo caddeeyo kala -goysyada foornada
Waxaa jira alaabooyin badan oo gaar ah oo suuqa ku jira ujeedadan iyo haddii aad u baahan tahay inaad caddeyso kala-goysyada madow ee aadka u madow, oo leh caaryar ama meel aan fiiro gaar ah lahayn, waxaa fiican inaad isticmaasho mid ka mid ah. Hadda, haddii wasakhda ku taal kala-goysyada dhoobada ay caadi tahay isticmaalka, sababtoo ah qoyaanka musqulaha, sababtoo ah dufanka ku urura jikada, iwm. ugu fiican waa ammonia iyo biyaha.
Kahor intaadan bilaabin waa inaad ilaalisaa naftaada sababtoo ah ammonia aad bay u xoogan tahay. Xiro maaskaro si aadan u nuugin qiiqa. xidho qaar ka mid ah galoofyada cinjirka ah si aanay u dhaawicin cidiyahaaga iyo gacmahaaga. Isku darka waxaad u baahan doontaa basin ay ku jiraan biyo kulul iyo daadinta ammonia. Haddii aad la yaabban tahay sida loo xisaabiyo cabbirrada, waxay noqon doontaa in ka badan ama ka yar hal ammonia 10 kasta oo biyo ah.
Isticmaal burush dheer oo leh bristles badh-adag si looga saaro wasakhda ugu badan ee suurtogalka ah. Qalabkan waxaad ku nadiifin kartaa kala-goysyada muraayadaha isla mar ahaantaana dusha laftiisa. Waxay si fiican uga shaqeysaa meelaha ugu wasakhsan ama meesha ay ka jirto caaryada si looga saaro kudka iyo bakteeriyada waxyeelada leh. Ka dib mari maro lagu qooyay biyo kulul si aad wasakhda uga saarto. Haddii aad rabto inaad ka saarto dhibcaha biyaha, waxaad ku tirtiri kartaa maro nadiif ah oo qalalan waxayna noqon doonaan kuwo dhalaalaya iyo sidoo kale nadiif ah.
Ammonia waa nacas, laakiin maaha sheyga kaliya ee aad isticmaali karto si aad u nadiifiso kala-goysyada tiirarka. Guriga waxaad heli kartaa xalal kale sida kuwan soo socda.
oo leh warankiiloJeermiska jeermiska ugu fiican, in kasta oo uu xoogaa khatar ku yahay caafimaadka. Warankiilo waxaad ku caddayn kartaa kala-goysyada taayirada oo aad gebi ahaanba jeermi-tihiin. Si aad u hesho geesaha adag si fiican waxaad isticmaali kartaa buufiye kaas oo aad u baahan doonto qas biyaha (had iyo jeer qabow) iyo qayb ka mid ah warankiilo.
Dawada ilkahaDaawada cadayga ee dhaqameed sidoo kale waa nadiifiye awood leh oo loogu talagalay kala-goysyada tiirarka. Haa, isticmaal mid loogu talagalay in ilkaha lagu caddeeyo, maadaama ay ka kooban yihiin bicarbonate, taas oo ah badeecada caddayn doonta kala-goysyada. Xaaladdan oo kale, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho burush duug ah oo aad si fiican ugu xoqin karto meelaha aad rabto inaad caddeyso. Wax ka shaqo badan, laakiin si la mid ah waxtar u leh.
Khamri cad iyo soodhahaNadiifinta iyo jeermiska jeermiska ugu fiican ee aad u isticmaali karto gees kasta oo gurigaaga ah. Inaguma daalin in aan sheegno waana taas nadiifinta khalka Si wada jir ah bicarbonate, waxay sameeyaan qalabka jeermiska jeermiska ee ugu fiican suuqa. Qiimo jaban, si sahlan loo heli karo, deegaan iyo tan ugu muhiimsan, aad u wax ku ool ah. Diyaari weel ay ku jiraan dareere biyo kulul leh, khal cad iyo baking soda. Ku buufi kala-goysyada oo ku xoq caday duug ah. Daawadani waxay si gaar ah faa'iido u leedahay kala-goysyada kuwaas oo aad u madow oo leh caaryada caaryada.
Mid kasta oo ka mid ah tabahaan waxaad ku caddeyn kartaa kala-goysyada tiirarka oo aad uga tagi kartaa si nadiif ah oo nadiif ah. Si looga fogaado wasakh badan oo urursan iyo inaad waqti badan ku bixiso nadiifinta. waa la door bidayaa in dib u eegis lagu sameeyo mar walbaTani waxay ka ilaalin doontaa inay soo ururto. Inkasta oo aad si joogto ah u nadiifiso dhogorta, walxaha daloolka leh ayaa loo isticmaalaa kala-goysyada kuwaas oo ay u fududahay caaryada inay ku bataan qoyaanka dartiis. Daryeel yar, waxaad ku ilaalin kartaa nadiif iyo qumman muddo dheer.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Khiyaamooyinka lagu caddeeyo kala-goysyada dhoobada